ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှလေ့လာမှုတွင်လျှို့ဝှက်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (2012) - Your Brain On Porn
ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်လေ့လာမှု porn စွဲ (2012) ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကမ္ဘာကဖျောထုတျ
လေ့လာမှု porn စွဲ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကမ္ဘာကဖျောထုတျမေလ 10, 2012
ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်ကနေတစ်ဦးကအဓိကလေ့လာမှုအလွန်အကျွံ porn ကြည့်ရှု၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကမ္ဘာကထိုသို့အသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအပေါ်ရှိပါတယ်သည့်ကြီးကျယ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အလင်းကိုသွန်းခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Gomathi Sitharthan ၏ ကနျြးမာရေးသိပ္ပံဌာန ယင်းမှပါမောက္ခ Raj Sitharthan စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ် porn စွဲနှင့်မည်သို့သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းသူတို့ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရသည်တဲ့သူသို့မကြုံစဖူးထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့ porn စောင့်ကြည့်သူကို 800 လူမျိုး၏အွန်လိုင်းမှလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှုကနေပဏာမရလဒ်တွေကို, စစ်တမ်းကောက်ယူသူတို့၏အမျိုးအ 43 ရာခိုင်နှုန်းကို 11 နှင့် 13 ၏အသက်အရွယ်အကြား porn ကြည့်ရှုရန်စတင်ခဲ့ကြောင်း porn ကိုကြည့် 47 မိနစ်, သုံးနာရီတစ်ရက်အကြား 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုသုံးစွဲထင်ရှားပါပြီ။ ပိုများသောစစ်တမ်းကောက်ယူ porn အသုံးပြုသူများသည်၏ထက်ဝက်ထက်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ် de-facto ဆက်ဆံရေးနှင့် 85 ရာခိုင်နှုန်းအထီးရှိကြ၏။
Dr. Gomathi Sitharthan က "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဆိုတာဘာလဲငါတို့ငါတို့အားလုံးသိကြပေမဲ့အခုအချိန်အထိငါတို့ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာမသိသေးဘူး" ဟုပြောခဲ့သည်။
“ မင်းကဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ငွေပေးချေရမယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်နဲ့အညိုရောင်စက္ကူအိတ်ထဲထွက်လာရမယ့်နေ့တွေရှိတယ်။ အခု၊ သင်ဘယ်နေရာမဆို၊ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး - အိမ်၊ သင်၏အိပ်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ ကား၊ ပန်းခြံ၊
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုလည်းအစွန်းရောက်ဖြစ်ပွားမှုအပေါ်အလင်းကိုသွန်း။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တန်းသားများကိုခန့် 20 ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးဖြစ်ခြင်းမှ porn ကိုကြည့်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုနှစ်သက်သူကပြောပါတယ်။ အကြောင်း 14 ရာခိုင်နှုန်းကိုအခြားအွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများကနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း, 30 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်အလွန်အကျွံကြည့်ရှုရန်ခံစားခဲ့ရကြောင်းအသိအမှတ်ပြု, သူတို့အွန်လိုင်းမဟုတ်ကြသည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီး 18 ရာခိုင်နှုန်းကိုကူးယဉျနှင့်အတူသာအာရုံစိုခဲ့ကြသည်။
"အဖြစ်မှန်ကတော့ညစ်ညမ်းနေဖို့ဒီမှာပါ။ သက်သေပြရန်အထောက်အထားများဖြင့်အထောက်အကူပြုသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုမျှတသောအမြင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်” ဟုပါမောက္ခ Raj Sitharthan ကဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းသူသည်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွင်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြpeopleနာများနှင့် ပတ်သက်၍ လူများပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။
ပုန်းစစ်တမ်းကောက်ယူသူတို့၏အမျိုးအ 88 ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်အစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်အွန်လိုင်းကရှာကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မယ်။ ဒေါက်တာ Gomathi Sitharthan နှင့်ပါမောက္ခ Raj Sitharthan လက်ရှိတွင်အွန်လိုင်းပူဇော်ရနိုငျသောကုသမှုအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုလေ့လာခြင်းသည်လေ့လာသင်ယူသောအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နားမလည်နိုင်ဟုယုံကြည်သည်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ဘ ၀ အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေနားလည်ပြီးသူတို့ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
သင်က Porn မှစွဲဖြစ်ပါသလား သင်ဟာဒီလေ့လာမှုမှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကဘယ်လိုကြည့်ရှုပါ
Timothy Boyer မှမေလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၂ တွင် - eMaxHealth အတွက်ဖြစ်သည်
ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနအနေဖြင့်ခင်ပွန်း-ဇနီးစိတ်ပညာရှင်အသင်း Raj နှင့် Gomathi Sitharthan အဆိုအရ, porn စွဲကြီးထွားလာသောပြဿနာနှင့်အချို့သောစွဲတိုင်ပင်မှူးမတ်ကိုသင်ယုံကြည်ရှိသည်မယ်လို့သကဲ့သို့ကောင်းစွာနားမလည်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုးဝါးဆုံးမေးခွန်းများကိုတစ်ခုမှာဒါခေါ် "ပျော့ porn" ၏ရံဖန်ရံခါကြည့်ရှုအလွန်အကျွံကြည့်ရှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်သင့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည်ကိုအကြမ်းဖက်များနှင့် / သို့မဟုတ်လူမှုရေးအရလက်မခံနိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထဲကသရုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါသုတေသနအဖွဲ့ကသောသင်ကသင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်အလေ့အထများမှကြွလာတဲ့အခါသင်ရပ်ဘယ်မှာစိတ်ကူးတစ်ခုပေးနိုင်ပါသည်တွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသီများ၏မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုမှာညစ်ညမ်းနေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒီမှာနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်, မရှိတော့မဂ္ဂဇင်းများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုဝယ်ခြင်းငှါတစ်ဦးညစ်ညမ်းဆိုင်ကိုသွားရှိခြင်းဖို့ကန့်သတ် porn ဖို့အသုံးပြုနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အစား, porn ၏တန်ခိုးသည်ယနေ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက "ဒီ Triple တစ်ဦးက" စျေးကွက်နည်းဗျူဟာအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့အမြတ်အစွန်းကုန်စည်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်:
porn anonymity ကိုထောက်ပံ့
porn အများအပြားကိစ္စများတွင်တတ်နိုင်နှင့် / သို့မဟုတ်အခမဲ့
သူတို့ကအစလူတိုင်းမညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ရန်သဘောတူကြောင်းထောက်ပြနေသည်။ မည်သည့်အပေါင်းတို့နှင့်ညစ်ညမ်းမိန်းမတို့အား demeaning နှင့်ငယ်ရွယ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့စဉ်အတွင်းလေးနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်မှုလွဲမှားစေရန်ဦးဆောင်သောအမြင်မှဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦးဿုံဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ပုံမှန်အလေ့အထ (မသက်ဆိုင်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်၏ဒီဂရီ၏) မှ porn အကွာအဝေးအပေါ်အမြင်များ ။
အဘယ်အရာကိုသုတေသီကြုံတွေ့ခဲ့ကြလွန်ခဲ့သောငါးနှစ်သူတို့ညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံကြည့်ရှုသူနဲ့ဆက်စပ်စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးပြဿနာများရှိသည်သော client များအတွက်တစ်ဦးတိုးမြင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ယုံကြည်ဒီ၏အမြစ်အင်တာနက်အမည်ဝှက်နှင့်အတူညစ်ညမ်းပိုပြီးလက်လှမ်းအောင်တိုက်ရိုက် attribute ဖြစ်ပါတယ်။
porn စွဲကုသအခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသုတေသီများကထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်နှင့်ဝသကဲ့သို့စွဲလမ်း၏အခြားအမျိုးအစားဖြစ်လျှင်အဖြစ် porn ကုသနိုင်ဖွယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းရှာပါ။ အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဖို့ဦးဆောင်အရာပေါ်သုတေသနဒါသာရံဖန်ရံခါလုပ်ပေးသူကိုအခြားသူများအားဆန့်ကျင်အဖြစ်လူအခြို့ porn နေ့စဉ်စောင့်ကြည့်အဘယ်ကြောင့်အပြည့်အဝနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ porn ကြည့်ရှုရာမှ abstinence စွဲကုသဆီသို့အရက်ထဲကနေ abstinence နှင့်အတူတန်းတူပေါ်မှာအထောက်အပံ့မျှမသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
အဆိုပါသုတေသီများနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိပ္ပံနည်းကျဒေတာ porn ကြည့်ရှု၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ချို့တဲ့ကြောင်းသတိပြုပါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသူတို့ယခင်ကမြင်ဘူး porn စွဲနေတဲ့လူနည်းစုအတွက်ထိန်းချုပ်မှုထဲကတွေအကြောင်းအသက်သို့ရာတွင်အစီရင်ခံစာများကန့်သတ်ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ 800 သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းမယ့် web-based လေ့လာမှုမှတဆင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏အတိုင်းအတာများနှင့်အလွန်အကျွံကြည့်ရှု၏သက်ရောက်မှုများကိုတွက်ချက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အောက်ပါဒေတာကိုသူတို့ကတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုဖြစ်ပါသည်:
• 85% အမျိုးသမီးကြည့်ရှု vs. 15% ယောက်ျား
•ကျော် 50% လက်ထပ်သို့မဟုတ်တစ်က de-facto ဆက်ဆံရေးအတွက်
• 71% ပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်အတွက်
• 43% ခေတ်ကာလ 11 နှင့် 13 နှစ်အကြား porn ကြည့်ရှုရန်စတင်
• 47% porn ကိုကြည့်တစ်နေ့လျှင် 30 နာရီ3မိနစ်အကြားပျမ်းမျှသုံးဖြုန်း
• 48% တက္ကသိုလ်ဒီဂရီခဲ့
• 52% အင်တာနက်ကနေကလစ်များနှင့် XXX က rated ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုပ်လုပ်
• 15% ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအကြောင်းတစ်နေ့တာအတွင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ fantasize
ဤအစိတ်ကူးယဉ်အပေါ်သို့• 22% လုပ်ရပ်အနည်းဆုံး4ကြိမ်တစ်ပတ်လျှင်
•ဝဘ်ကနေတစ်ဆင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာပေမယ့်အကူအညီနဲ့ရှာကြိုက်တတ်တဲ့မှ 80% ဆန္ဒရှိ
•အကြောင်း 30% သူတို့အွန်လိုင်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမေးမွနျးတဲ့အခါမှာသူတို့ကခုခံကာကွယ်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်
•ကျော် 35% သူတို့အွန်လိုင်းအခါသူတို့နှောင့်အယှက်လျှင်သူတို့ဖမ်းယူသို့မဟုတ်ကြီးတွေပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်
•ကျော် 20% ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အွန်လိုင်းပါပြီအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးလွှဲမည်ဟုဆိုသည်
•ကျော် 25% သူတို့ porn ကိုကြည့်ဖြုန်းအချိန်ပမာဏကိုခုတ်လှဲရန်ကြိုးစားပေမယ့်ကျရှုံးကပြောပါတယ်
တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးညစ်ညမ်းပြဿနာရှိပါတယ်ရှိမရှိဖော်ထုတ်လေ့လာအပြုအမူတွေအပေါ်အခြေခံသည်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအရ, သူတို့ကလူနာကိုယ်တိုင်မြင်ကြပြီထိုအပြုအမူအချို့တို့ပါဝင်သည်:
(၁) ပညာရေးကိုကျော်။ လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုလိုငွေပြမှုများစွာရှိသောလူငယ်များ (ဥပမာ - ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်စကားမပြောခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုစိတ်ဆန္ဒ၏“ အရာဝတ္ထုများ” အဖြစ်သာရှုမြင်ခြင်း၊ လျောက်ပတ်သောဆက်နွယ်မှု၏မှားယွင်းသောယူဆချက်များ) ။
(၂) အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုနည်းပါးလာသော၊ 'ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်' အပြုအမူများ၊ အကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားများမှငွေကုန်ကြေးကျခံခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံခံစားလိုသောဆက်ဆံရေးရှိလူကြီးများ (ဥပမာ၊ လက်ထပ်ပြီး de facto) ။ မြင့်မားသောအန္တရာယ်အပြုအမူ, etc
အလုပ် / ပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင် (3) ပြင်းထန်သောပြတ်တောက်။ ပြည်သူ့ဆုံးခဲ့ကြခြင်းကြောင့်အလုပ်ခွင်မှာ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမှအလုပ်အကိုင်များစသည်တို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
(4) သူတို့ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေထဲကနေမြင်သောအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ကြိုးစားနေသည် (ဆယ်ကျော်သက် / အရွယ်မရောက်သေးသူနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံ) နှင့်ဥပဒေနှင့်အနှောင့်ရှက်တက်အဆုံးသတ်ပါပြီ။
(5) (တစ်ခါတစ်ရံ "အနိုင်နိုင်ဥပဒေရေးရာ" အဖြစ်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်) ကလေးက porn ကြည့်ရှုဥပမာ, အခြားသူများအဖြစ်ထူးထူးဆန်းဆန်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်စဉ်းစားပါပစ္စည်းများကိုမိမိတို့ကြည့်ရှု "ကိုတိုးချဲ့နေ" ။ ကြည့်ရှုရန် "သည်းခံစိတ်" အခြားဇာတ်စင်မှတီထွင်ခဲ့ပြီးသူတို့ပျော်မွေ့တွေ့ကြုံခံစားဖို့ ပို. ပို. "အစွန်းရောက်" ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်တူသောဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တရားဝင်သင့်လျော်သောအပြုအမူသည်အဘယ်အရာမှအဖြစ် "အဖြစ်မှန်" နဲ့ထိတွေ့ဆုံးရှုံးလျှင်အဖြစ် (6) အချို့သောလူနာနှင့်အတူကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
(7) ဤလမ်းကြောင်းသစ်မဆိုအထူးသဖြင့်အသက်အရွယ် / လုပ်ငန်းခွင်အုပ်စုများမှကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ ထင်ရှားတဲ့ရာထူးအတွက်လူအတော်များများကြောင့်၎င်းတို့၏ကြည့်အလေ့အထများမှဒုက္ခခဲ့ကြပြီ။
(8) ကျွန်တော်တို့သည်အန္တရာယ်ယူခြင်း, နှင့်ပြည်ပ "လိင်ခရီးစဉ်" တွင်ပါဝင် Sensation ရှာ, လူအခြို့ Fantasy ကျရောက်နေတဲ့တစ် proclivity ရှိသည်ထင်, ဒါမှမဟုတ်တချို့အဖြစ်မစံနေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်အခြားအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။
အဆိုပါသုတေသီများလာမယ့်အခြားသူများကိုမကျင့်သော်လည်းတချို့လူတွေကအလွန်အကျွံ porn ရှုမြင်အဘယ်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ရှာသောလေ့လာမှုများစတင်လိမ့်မည် ဒါကြောင့်ပညတ္တိကျမ်းဆန့်ကျင်မယ့် သိ. ထိုကဲ့သို့သောကြည့်ရှုတရားမဝင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်ဆက်လက်အဘယ်ကြောင့်; ဒါဟာဝေးလွန်းမယ့်အနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုတားဆီးသောအကြည့်ရှုသူအချို့အတွင်းမှကားအဘယ်သို့; နှင့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခန်းကဏ္ဍ desensitization လျှင်ပိုမိုဆိုးရွားညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအတွက်ပါဝင်သည်။